XOG-Kutladda NISA oo dhabar jebin ku bilowday Farmaajo iyo Saraakiil waji cusub la soo baxday. – Soomaali 24 Media Network
XOG-Kutladda NISA oo dhabar jebin ku bilowday Farmaajo iyo Saraakiil waji cusub la soo baxday.
Posted on May 10, 2022 Leave a Comment on XOG-Kutladda NISA oo dhabar jebin ku bilowday Farmaajo iyo Saraakiil waji cusub la soo baxday.
Waxaa soo baxaya warar sheegaya in kutladdii siyaasadda ee hey’adda NISA ay gadaal ka toogteen madaxweyne Farmaajo iyadoona qaar kamid ah saraakiisha ay safka hore ka galeen is bedello ku yimid hanaankii siyaasadda.
Labadii sano ee la soo dhaafay ayaa waxaa aad walaac looga qabay islamarkaana dhisnaa kutlad isku xiran oo kamid ah saraakiisha NISA kuwaas oo qaar soo galeen baarlamaanka qaarna iyagoo banaanka ay qeyb ka ahaayeen abaabulada siyaasadda. Waxaana lagu eedeynayay in ay Farmaajo u boobayaan doorashada.
Balse xogaha hadda soo baxaya ayaa tilmaamaya in dhabar jebin ay saraakiishu kutladda ahayd ku sameeyeen Farmaajo, kana shaqeynayaan sidii doorashada loogu jebin lahaa.
Saraakiisha NISA ee tilaabadan qaaday ayaa waxaa kamid ah Yaasiin Fareey, Cabdullahi Dheere, Cabaas, Cabdiraxmaan Dheere iyo kuwo kale oo badan, waxaana horboodaya Cabdullahi Dheere oo markii hore kamid aha saraakiisha ugu dhaw Farmaajo, halka Cabdiraxmaan Dheere la wariyay inuu lacagtii ololaha qeyb kamid ah la goostay.
Taliyaha dabagalka NISA Cabdullahi Dheere oo la aaminsan yahay inuu isbedelkan horboodayo ayaa sidoo kale bixiyay oo banaanka keenay danbiyo qarsoonaa oo Farmaajo horay u galay, waxaana si hoose looga soo xigtay inuu Farmaajo ku qancin waayay fariimo ay usoo direen sirdoono caalami ah, kuna saabsaneyd in Farmaajo doorashada ka haro.
Xubno kamid ah kutladda NISA ayaa laga soo xigtay in markii hore uu Farmaajo waday dhismaha hey’adda balse mudooyinkii dambe uu bilaabay inuu dano gaar ah u adeegsado.
Saraakiisha NISA ee uu horboodayo Cabdullahi Dheere ayna kamid yihiin Yaasiin Fareey, Cabaas iyo kuwo kale ayaa xilligan ka shaqeynaya ololaha rag kale, waxaana ay si dhaw ula heshiiyeen qaar kamid ah musharaxiinta ugu cad cad xilka madaxweynaha.
Dadka falanqeeya siyaasadda waxay qabaan in tilaabadan ay garabkii ugu weynaa ee uu ku tashanayay Farmaajo ahaydna Kutladda NISA uu waayo ay ka dhigan tahay inuu barxadda kala tagayo guul daro siyaasadeed midda ugu daran ee lama filaanka ah.
Hey’adaha amniga dalka ayaa dhowrkii sano ee la soo dhaafay waxaa aad looga digayay in ay ku milmaan siyaasadd, waxaase dhacday in natiijada ku Milankooda noqotay in ay afka ciidda u daraan ninkii ku tashanayay ee muddo soo ababiyay.
Dhinaca kale waxaa soo baxayay warar xooggan oo sheegaya in sirdoono caalami ah ka shifeen Farmaajo in sababta uu isu sharaxay ay tahay in aan danbi lagu soo oogin balse uu sii ogyahay in aanu guul ka keeneyn doorashada.
Macluumaadka waxay intaas ku darayaan in musharaxiin badan ay safaf dhaa dheer ugu jiraan sidii ay dhankooda u mari lahaayeen kutladda NISA ee Korneel Cabdullahi Dheere uu hogaamiyo, iyadoona waqti kooban ay ka harsan tahay maalinta ugu danbeysa ee doorashada.
Ninkan lagu bartay wajiyada badan ee Cabdullahi Dheere ayaa xiriir la leh sirdoonada caalamka, waxaana rag badan oo kursiga Villa Somalia doonaya rumeysan yihiin inuu caalamka ka gadi karo.
← XOG-Kutladda siyaasadda NISA oo Farmaajo u deyrisay, Kheyre oo helay fursad weyn, iyo Musharax 3-aad oo Plan B soo galay
XOG-NISA oo lacag Afar dowladood laga keenay ku qeybineysa Muqdisho, Xildhibaanada oo musharaxa dhabta ah ku wareersan iyo Sir Culus. →
Copyright © 2022 Soomaali 24 Media Network